Capsule polishing စက်
m / c တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊
Rotary အိတ် - ပေးထားသောထုပ်ပိုး m / c
ထုပ်ပိုးစက်တံဆိပ်ခတ်4နှစ်ဖက်
အလိုအလျောက် Cartoning စက်
A. အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောနေရာသည်ကျယ်ဝန်း၊ တောက်ပ၊ ချောမွေ့။ သန့်ရှင်းရမည်။
ခအဆိုပါ disassembly tools တွေကိုသင့်လျော်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူအပြည့်အဝပြင်ဆင်နေကြသည်။
C. ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တုံနှင့်ရေနံစည်ခွဲဝေ, ရပ်တည်ချက်ပြင်ဆင်ပါ
စက်မှု disassembly ၏အခြေခံမူ
အေပုံစံနှင့်သက်ဆိုင်ရာဒေတာအရ, မော်ဒယ်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တပ်ဆင်ဆက်ဆံရေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်, ပြီးတော့ပြိုကွဲခြင်းနှင့် disassembly ၏နည်းလမ်းနှင့်ခြေလှမ်းများဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
B. ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါ။ ပြိုကွဲခြင်းခက်ခဲသောအခါအကြောင်းရင်းကိုအရင်ရှာဖွေပြီးပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်သင့်တော်သောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ပါ။
dism ဖျက်သိမ်းသောအစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးခြင်း (သို့) ဆုံးရှုံးခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းများ၏အရွယ်အစားနှင့်တိကျမှုအရသီးခြားသိုလှောင်ထားရမည်။ တိကျ။ အရေးကြီးသောအပိုင်းများကိုအထူးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားရမည်။
E. ဖယ်ရှားထားသောသော့ခလောက်နှင့်အခွံမာများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုမထိခိုက်စေဘဲပြန်လည်နေရာချထားရမည်။ သို့မှသာအရှုံးကိုရှောင်နိုင်ပြီးတပ်ဆင်မှုကိုလွယ်ကူစေသည်။
အက်ဖ်လိုအပ်သကဲ့သို့ဖြုတ်။ မဖြိုမချိသူများအတွက်၎င်းတို့ကိုအခြေအနေကောင်းမွန်သည်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်ကိုဖယ်ရှားရမည်၊ ပြtroubleနာများနှင့်ဂရုမစိုက်မှုများကိုရှောင်ရန်၊ ပြုပြင်မှုအရည်အသွေးကိုအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။
(၁) ဖြုတ်ရန်ခက်ခဲသောသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်း၏အရည်အသွေးကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဖျက်သိမ်းပြီးနောက်ကွန်ယက်အစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေနိုင်သောဆက်သွယ်မှုအတွက်၎င်းကိုဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှု၊ ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ဂဟေဆက်ခြင်းကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်သမျှဝေးဝေးရှောင်ရှားရမည်။ စသည်တို့
(၂) အပိုင်းကိုရိုက်နည်းဖြင့်ထိတွေ့သောအခါပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်း (ထိုကဲ့သို့သောကြေးနီစင်ကြယ်သော) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပျော့ပျောင်းသောကူရှင်သို့မဟုတ်သံတူသို့မဟုတ်လာကြတယ်အပိုင်း၏မျက်နှာပြင်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကောင်းစွာတူးရမည်။
(3) တပ်ဆင်ထားစဉ်အတွင်းသင့်လျော်သောအင်အားကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုမည်သည့်ပျက်စီးမှုမှမဆိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ပွဲ၏နှစ်ပိုင်းအတွက်အပိုင်းတစ်ခုပျက်စီးရန်လိုအပ်ပါကပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုး၊ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲများသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကောင်းသည့်အပိုင်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
(၄) ကြီးမားသောအရှည်နှင့်အချင်းနှင့်တူသောတိကျသောပါးလွှာသောရိုးတံ၊ ဝက်အူစသည်တို့ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ရှင်းလင်းစွာ၊ အမဲဆီနှင့်ဒေါင်လိုက်ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ပုံပျက်သောအရာများကိုရှောင်ရှားရန်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအမျိုးမျိုးသောအချက်အလက်များဖြင့်ပံ့ပိုးနိုင်သည်။
(၅) ဖယ်ရှားထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသန့်ရှင်းပြီးသံချေးမသုံးသင့်ပါ။ သံချေးတက်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသံချေးမတက်စေရန်အတွက်တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများသာမကရေနံစက္ကူများကိုလည်းဖုံးအုပ်ထားသည်။ ပိုများသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအပိုင်းများ ခွဲ၍ ခွဲခြားပြီးနောက် marking ပြီးနောက်ထားရမည်။
(၆) သေးငယ်သော၊ အလွယ်တကူပျောက်ဆုံးသွားသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော set screw မ်ား၊ အခွံမာသီးများ၊ အဝတ်လျှော်များနှင့်တံသင်များစသည်တို့ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုတတ်နိုင်သမျှတပ်ဆင်ပါ။ ရိုးတံပေါ်ရှိအစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုမူလအမိန့်အတိုင်းပြန်ယာယီတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်သံမဏိဝါယာကြိုးဖြင့်ကြိုးပေါ်တွင်ချည်ထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်အဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်သည်။
(၇) ပိုက်၊ ရေနံနှင့်အခြားရေနံ၊ ရေနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းများ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်သန့်ရှင်းပြီးသောအခါဖုန်နှင့်အညစ်အကြေးများမှကင်းဝေးစေရန်တင်သွင်းခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းတံဆိပ်ဖြစ်သင့်သည်။
(9) ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့နှင့်အဘယ်သူမျှမ positioning ကို device ကိုသို့မဟုတ် directional features တွေရှိသည်သောအဆင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအဘို့, သူတို့ကတပ်ဆင်စဉ်အတွင်းအလွယ်တကူဖော်ထုတ်ခံရဖို့သကဲ့သို့, disassembly ပြီးနောက်မှတ်သားခံရကြလိမ့်မည်
(1) စုဝေးအစိတ်အပိုင်းများကိုသတ်မှတ်ထားသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရမယ်, နှင့်မဆိုအရည်အချင်းမရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်လို့မရပါဘူး။ ဒီအပိုငျးစုဝေးမတိုင်မီတင်းကျပ်သောစစ်ဆေးခြင်းလွန်ရမည်ဖြစ်သည်။
(2) ကိုက်ညီမှုတိကျမှန်ကန်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မှန်ကန်သောကိုက်ညီမှုနည်းလမ်းရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်အမြောက်အများကိုစက်မှုဆိုင်ရာပြုပြင်ခြင်းသည်အပြန်အလှန်တပ်ဆင်မှုနှင့်ကိုက်ညီသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်အခြားနည်းလမ်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ အပူတိုးချဲ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမထိုက်မတန်ကွာဟမှုများအတွက်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ ကွဲပြားခြားနားသောချဲ့ထွင်ကိန်းနှင့်အတူပစ္စည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းမထိုက်မတန်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်, တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းအပူချိန်ကနေအများကြီးကွဲပြားတဲ့အခါ, ဒီကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကွာဟမှုပြောင်းလဲမှုကိုလျော်ကြေးပေးသင့်ပါတယ်။
(၃) တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာကွင်းဆက်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပါ။
(၄) စက်အစိတ်အပိုင်းများ၏တပ်ဆင်မှုအမိန့်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်မူအရ - ပထမ ဦး ဆုံးအတွင်း၌၎င်းအပြင်အပြင်၌ရှိရမည်၊ ပထမခက်ခဲသည်၊ ထို့နောက်လွယ်ကူသည်၊ ပထမတိကျမှုနှင့်အထွေထွေ။
(၆) အစိတ်အပိုင်းများသန့်ရှင်းရေးနှင့်ချောဆီကိုဂရုပြုပါ။ တပ်ဆင်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကို ဦး စွာသန့်ရှင်းစွာထားရမည်။ ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရွေ့လျားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သန့်ရှင်းသောချောဆီနှင့်ဖုံးအုပ်ရမည်။
(၇)“ ယိုစိမ့်မှုသုံးခု” မှကာကွယ်ရန်အသင်းတော်ရှိတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုဂရုပြုပါ။ သတ်မှတ်ထားသောတံဆိပ်ခတ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့, မတရားအစားထိုးကိုမသုံးနိုင်သည်။ တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်၏အရည်အသွေးနှင့်သန့်ရှင်းမှုကိုဂရုပြုပါ။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်တင်းကျပ်စွာတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအထူးဂရုပြုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငြိမ်သောတံဆိပ်များသည်သင့်လျော်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုသုံးနိုင်သည်။
(8) သော့ခတ် device ကို၏တပ်ဆင်လိုအပ်ချက်များကိုအာရုံစိုက်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာပါ။
၃ ။ စက်မှုတံဆိပျကို disassembly နှင့်တပ်ဆင်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပျမှု
စက်မှုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည်စက်ကိုယ်ထည်တံဆိပ်ကိုဖွင့်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အပြောင်းအလဲတိကျမှုသည်အတော်အတန်မြင့်မားသည်။ အထူးသဖြင့်ရွေ့လျား static လက်စွပ်ဖြစ်သည်။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်နှင့်စုဝေးတံဆိပ်ခတ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်။
disassembly စဉ်အတွင်း 1. ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
၂) စက်နှစ်ခုလုံး၏စုပ်စက်နှစ်ခုစလုံးတွင်စက်တံဆိပ်ပါရှိသည်ဆိုပါက၊ တစ်ခုအားအခြားတစ်ခုမှဆုံးရှုံးခြင်းမှတားဆီးရန်သင်တပ်ဆင်သည့်အချိန်တွင်သတိထားရမည်။
၃) အလုပ်လုပ်သောစက်မှုတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဂလန်းလျှော့ချသောအခါတံဆိပ်ခတ်သည့်မျက်နှာပြင်ရွေ့လျားပါက rotor နှင့် stator ring အစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးသင့်ပြီးတင်းကျပ်ပြီးနောက်တစ်ခါအသုံးမပြုသင့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လျော့နည်းသွားပြီးနောက်မူရင်းပွတ်တိုက်အားအတွဲ၏မူလလမ်းကြောင်းသည်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ မျက်နှာပြင်၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုအလွယ်တကူဖျက်ဆီးနိုင်လိမ့်မည်။
၄) အကယ်၍ တံဆိပ်ခတ်သောအရာသည်ဖုန်သို့မဟုတ် condensate ဖြင့်ချည်နှောင်ထားပါကစက်မှုတံဆိပျကိုမဖယ်ရှားမီ condensate ကိုဖယ်ရှားပါ။
၁) တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ၊ တပ်ဆင်သောတံဆိပ်ခတ်အစိတ်အပိုင်းအရေအတွက်နှင့်လုံလောက်မှုရှိမရှိသေချာစွာစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ရွေ့လျားမှုနှင့်ငြိမ်သောကွင်းများ၌တိုက်မိခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းနှင့်ပုံပျက်ခြင်းစသည့်ချို့ယွင်းချက်များရှိမရှိ။ ပြproblemနာတစ်ခုခုရှိရင်၊ အပိုပစ္စည်းအသစ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပါ။
၂) လက်၏အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂလင်း၏ထောင့်သည်သင့်လျော်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည်လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါက၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
၃။ စက်မှုတံဆိပျ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးနှင့်ဆက်စပ်သောအဆက်အသွယ်မျက်နှာပြင်များအားတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ acetone သို့မဟုတ် anhydrous alcohol ဖြင့်သန့်စင်ရမည်။ တပ်ဆင်စဉ်အတွင်းသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ၊ အထူးသဖြင့်ရွေ့လျား။ ငြိမ်သောကွင်းများနှင့်အရန်တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းများသည်အညစ်အကြေးနှင့်ဖုန်မှုန့်များကင်းစင်ရမည်။ ရွေ့လျား။ စာရေးကိရိယာကွင်းများ၌သန့်ရှင်းသောဆီသို့မဟုတ်တာဘိုင်ဆီသန့်ရှင်းသောအလွှာကိုအသုံးပြုပါ။
4) နားချင်းဆက်မှီပြီးနောက်အထက်ဂလင်းတင်းကျပ်သင့်သည်။ ဂလင်းအပိုင်း၏ချွတ်ယွင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့သော့ခလောက်အညီအမျှတင်းကျပ်ရပါမည်။ အမှတ်တစ်ခုချင်းစီကိုခံစားမှု (သို့) အထူးကိရိယာဖြင့်စစ်ဆေးပါ။ အမှားသည် ၀.၅၅ မီလီမီတာထက်မကြီးရပါ။
၅) ဂလင်းနှင့်အ ၀ င်ရိုးသို့မဟုတ်ရိုးတံအတွင်းအချင်းနှင့်အကြားကိုက်ညီသည့်ရှင်းလင်းခြင်း (နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု) ကိုစစ်ဆေးပြီးပတ် ၀ န်းကျင်ညီမျှမှုကိုသေချာစေပြီး ၀.၁၀ မီလီမီတာထက်မပိုသော plug တစ်ခုဖြင့်အမှတ်တစ်ခုစီ၏သည်းခံမှုကိုစစ်ဆေးပါ။
6) နွေ ဦး ချုံ့အရေအတွက်ပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီထုတ်ယူရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကြီးလွန်းသို့မဟုတ်သေးလွန်းလွန်းရန်ခွင့်မပြုပါ။ အမှား± 2.00mm ဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်လွန်းပါကတိကျသောဖိအားမလုံလောက်နိုင်ပါ။ နွေ ဦး ထိုင်ခုံတွင်တပ်ဆင်ထားသောနွေ ဦး သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေ့လျားပြီးနောက်၊ တစ်ခုတည်းသောနွေ ဦး ကိုအသုံးပြုသောအခါ, နွေ ဦး ၏လည်ပတ် ဦး တည်ချက်အာရုံစိုက်ပါ။ နွေ ဦး ၏လည်ပတ် ဦး တည်ချက်ရိုးတံ၏လည်ပတ် ဦး တည်ချက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သင့်သည်။
၇။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောလက်စွပ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိရမည်။ ရွေ့လျားနေသောလက်စွပ်ကိုနွေ ဦး သို့နှိပ်ပြီးနောက်တွင်အလိုအလျောက်ပြန်ခုန်နိုင်လိမ့်မည်။
၈။ တည်ငြိမ်သောလက်စွပ်တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်လက်စွပ်ကိုငြိမ်ငြိမ်သံကွင်း၏နောက်ကျောတွင်နေရာချပြီးတံဆိပ်ခတ်အဆုံးအဖုံးထဲသို့ထည့်ပါ။ တည်ငြိမ်သောလက်စွပ်အပိုင်း၏အကာအကွယ်ကိုသေချာစေရန်၊ တည်ငြိမ်သောလက်စွပ်အပိုင်း၏ဒေါင်လိုက်နှင့်အဆုံးအဖုံး၏အလယ်လိုင်းနှင့်ငြိမ်သောလက်စွပ်ဆုံလည်ဆန့်ကျင်မှုး၏ကျောဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးသောဆံပင်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်ဂရုပြုပါ။ သူတို့ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အဆက်အသွယ်မလုပ်ပါနှင့်။
9) installation လုပ်ငန်းစဉ်၌, ကရိယာများနှင့်အတူတံဆိပ်ခတ်ဒြပ်စင်ကိုတိုက်ရိုက်ခေါက်ဘယ်တော့မှခွင့်မပြု။ ခေါက်ရန်လိုအပ်သည့်အခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည့်အခါတံဆိပ်ခတ်ရန်အတွက်အထူးကိရိယာများကိုအသုံးပြုရမည်။
post အချိန်: ဖေဖော်ဝါရီ -28-2020